မောငျ(စှယျစုံကမျြး): အခွေထုတ်ချင်သူများနဲ့ ဓာတ်ပုံနောက်ခံ သီချင်းလုပ်ချင်သူအတွက်ဆော့ဝဲ
အခွေထုတ်ချင်သူများနဲ့ ဓာတ်ပုံနောက်ခံ သီချင်းလုပ်ချင်သူအတွက်ဆော့ဝဲ
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဓာတ်ပုံနဲ့ သီချင်းလုပ်ချင်ရင် အခွေထုတ်ချင်ရင် လက်ဆောင်ပေးဖို့ 
ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ လုပ်ချင်သူများ အသုံးပြုဖို့ တကယ့်အကောင်းဆုံး ဆော့ဝဲ
သုံးဖူးသမျှတွေထဲမှာ ဒီတစ်ခုကို သဘောအကျဆုံး ဒီဇိုင်းတွေ အဆန်းသစ်ဆုံးပဲလို့ 
ထင်မိပါတယ် မြန်မာစာ ရေးချင်တာလည်း အဆင်ပြေတယ် စာတန်းထိုးဖို့ လှတယ်
Flash Maker လိုပဲ Animation အရုပ်လေးတွေနဲ့ ကလိလို့ ရတယ် နောက်ခံ Effect
ထည့်မယ်ဆိုလည်း Animation လေးတွေ ခရီးသွားတတ်သူတွေ အတွက်ဆိုရင်လည်း
အဆင်ပြေတယ် ဘာလို့ လည်းဆိုရင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီကို မြန်မာစာတန်းဖို့ ပေးဖို့ 
အရမ်းအဆင်ပြေတော့ အမှတ်တရ ရိုက်လာတဲ့ နေရာလေးတွေ စကားလေးတွေထဲ့
အဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ ရတယ် ။ ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ပေးချင်သူတွေလည်း
အဆင်ပြေနိုင်တယ် သုံးသမျှဆော့ဝဲတွေထဲမှာ သဘောအကျဆုံး ဆော့ဝဲတစ်ခုပဲ...။
Youtube တိုက်ရိုက်တင်မယ်ဆိုလည်း အဆင်ပြေတယ်.ဘဲထီး Good ဘဲမGood :D
နမူနာ ၂ခု အစမ်းခဏ လုပ်ကြည့်ထားတယ် နမူနာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ.
Ziddu က တင်တာမလို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်; ဒီမှာဖတ်
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ 1 - Wondarshare Slidshow Maker
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ2- Wondarshare Slidshow Maker
Author Anonymous at 11:20:00 PM
Labels: Computer ထဲမှာရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ, Photo Slideshow လုပ်နည်း
ဆရာ တစ်လုံးရေ ... စာရေးလို့ ရတယ်ဆိုလို့အရမ်းကြိုက်သွားတာ
အားရဝမ်းသာ ဒေါင်းတော့ link သေနေပြီ ဆရာ .... လုပ်ပါအုံး ။
ဟုတ်ပ Mediafire က ပြောနေတယ် Violation တဲ့ အခု Ziddu က ပြန်တင်နေတာ ခဏလေးစောင့်နော် ထမင်းစားပီးနားနာနေနေ အိပ်အုံး အခုမှ ပြန်တင်တာမို့:) ခဏနေရင် ရတော့မယ်
Ziddu က လင့်အသစ် ပြန်တင်လိုက်တာမလို့Download ယူလို့ ရပါပြီ.
Mediafire နဲ့တင်ထားတာမရှိဘူးလား bro
ကိုစွယ်ရေ ကျွန်တော်လည်ဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဒေါင်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးပါဦး ကျေဇူးပြုပြီ
ဆရာ...ရေ.....ကူညီပါဦး....ဗျ........အကုန်လုံးကလိကြည့်ပြီးလို့ သိမ်းလိုက်တယ်.....video...ဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့.....Evaluation Copy
Wondershare DVD Slideshow Builder ဆိုတဲ့စာတန်းတွေပါပေါ်နေတယ်ဆရာ....အဲဒီစာတန်းတွေပျောက်သွားအောင်လုပ်နည်းလေးပြောပြပါဦးဆရာရယ်......အားကိုးပါတယ်....ဆရာ..
ဆော့ဝဲကို အင်စတောလုပ်ပီးရင် ပိတ်လိုက်ပါ ဆော့ဝဲနဲ့ အတူ Crack ဖိုင်ပါပါတယ် Crack ဖိုင်ကို Localdisk C = Programs ထဲက Wondarshare Folder ထဲကို Paste ချလိုက် ပီးမှ့ ဆော့ဝဲကိုသုံးပါ
Wondershare Floder ကိုမတွေ.ဘူးအကို ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ စာတန်းကပေါ်နေတယ်
Zaw Zaw said...
Crack file ကိုထည့်လဲ Evaluation Copy ပြနေတုန်းဆရာရေ ကျွန်တော် install လုပ်တာများလွဲနေသလား register လုပ်ခိုင်းရင် free trial ရွေးပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့ standand mode ရွေးလိုက်တယ် မှားရေင်ပြောပေးပါဆရာ valentine day အမှီ ကောင်မလေးကို လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါ
ဆရာရေ...ဆရာပြောသလိုလုပ်ကြည့်ပြီးပြီးအဲဒီ Evaluation Copy စာကြောင်းပေါ်တုန်းပဲမပျောက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆရာဖြစ်နိုင်ရင်အဲဒီစာကြောင်းပျောက်အောင်လုပ်နည်းကိုဓါတ်ပုံနဲ့ တင်ပြပေးပါလားဆရာ...လေးစားစွာဖြင့်.....
ကျွန်တော်လဲမပျောက်ဘူး ဆ၇ာမောင်ေ၇ လုပ်ပါအုံး စာတန်းမပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ
တင်မှာပါ၊တစ်ကယ်ပါဗျာ ၊ lnnet31@gmail.com
၀ိုးးးးးးးးးးးး အခုမှတွေ့တယ်။ လိုချင်နေတာကြာပြီ။ ကလိဦးမှ ။ ကျေးဇူးး)
အစ်ကိုရေ ကူပါအုံး စာတန်းကြီးဖျောက်လို့ရရင်တော့ အရမ်းမိုက်တယ်....
ဖျောက်ပုံဖျေက်နည်းလေး သိရင်ပြောပါအုံးမယ် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...
တင်ပေးရင်အရမ်းကိုကောင်းမှာပဲဗျာ...ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရလို့ပါ..crack file ကို paste လဲမရဘူးဗျာ...ပေါ်နေတုန်းပဲ..လက်စနဲ့..ဆော့ဖ်ဝဲလေးတင်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲဗျာ...ကျေးဇူးပါ
အကို Wondarshare Slidshow Maker
Register တောင်နေတယ် ဘယ်လိုထဲရပသလဲ အားရင်ရှင်ပြပေးပါနော်
Register တောင်းနေတယ်. ဘယ်နားကရှာထည့်ရပါမလဲ
ကိုယ်ပိုင် website ပြုလုပ်ချင်လို့ပါ.
ကျေးဇူးပြုပြီး ပြုလုပ်ပုံလေး ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ..
Download မရဘူးအကိုရေး ဖြစ်နိုင်ရငိ် software ဖိုင်ကိုမေးထဲကိုပို့ပေးလို့မရလား sawlaywar12@gmail.com ပါအကို။
yar ma said...
အကိုရေ wamdershare dvd slidesh က trial ပဲရတယ် full သုံးလို့ မရဘူးလားအကို့ ရမယ်ဆို ကူညီပါဦးနော်..ကျေးဇူးပါ..အဆင်ပြေမယ်ဆို မေးပို့ ပြီးပြောပြပေးပါလား magway.king.607@gmail.com ပါ..
ကိုလူပျို (ဗလုံ) said...
ရပါတယ် ခဗျဆွဲလိုရော လုပ်လို့ လဲ သဘောကျပါတယ် ဒါပေမယ် အလယ်တည့်တည့် ကြီးမှာ ဘာလို့သူ့ ဆော့ဝဲနမ်မည်ကြီးပါနေတာလဲမသိဘူး video လုပ်ပီးရင်
ကိုမောင်ရေ အလယ်မှာ Evaluation Copy
Wondershare DVD Slideshow Builder ဆိုတဲ့
kalartha shwe myo taw said...
အကို ရေ့ မသွားပြီးဗျ ကျေးဇူးတင်တယနော် နောကလဲ လာယူအုံးမှာပါ အခုတော့
အစ်ကိုရေ ညီကိုကူညီပါအုံး registration code ကဘာထည့်ရမှာလည်းအစ်ကို
smilewish20@gmail.com ကိုမေးပို့ပေးပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားပေးလျှက်ပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကြိုက်လို့ယူသွားပါတယ် ဒါပေမဲ့ နောက်ခံသီချင်းထည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ပြောပြပါလား ဘယ်လိုထည့်ရမှာကို
ဆရာသမားေ၇ကူညီပါဦး စာတန်းထိုးတာ စာပေါ်ရင်မမှန်လို့ ကျေဇူးပြုပြီးကူညီပါဦး
တကယ်လိုအပ်လို့ပါ မေးထားခဲ့မယ်နော် zinkokozin806@gmail.com
ဖုန်းရော ကွန်ပျုတာမှာပါ သုံးလို့ ရတဲ့ စကားပြောဆော့ဝဲ (မဆဲနဲ့ နောသူ့ ကို)
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဖုန်းအတွက်သာမဟုတ်ပဲ ကွန်ပျုတာမှာလည်း သုံးလို့ ရပါတယ် အပျင်းပြေ အပြန်အလှန် စကားပြောလို့ ရပါတယ် ။ သိချင်တာလည်း မေးလိ...
ကွန်ပျုတာထဲ Virus ၀င်တာတွေ အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခု
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ကွန်ပျုတာထဲမှာထည့်ထားရင် ထိုးလာသမျှ Memory Stick တွေကို ဗိုင်ရပ်စ် ရှိလား မရှိလားစစ်ပေးပါတယ် အထူးသဖြင့် Auto.run ...
Samsung ဖုန်းကိုင်သူများ ဖုန်း Phone Setting တစ်ခုလုံး မြန်မာစာ ပြောင်းချင်သူအတွက် Samsung Zawgyi Enabler
ဒီဆော့ဝဲကတော့ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို မြန်မာစာနဲ့ ပေါ်စေတာမလို့ မိုက်တယ် မြန်မာစာမမှန်တာ အပြည့်မပေါ်တာ ဖတ်မရတာ မဖြစ်တော့ပဲ အားလုံးကို Myanmar...
နေ၀င်ခြင်းတွေကို သရုပ်ခွဲရင်းနဲ့ပဲ ဇရာသဘောဆောင်တဲ့ တုတ်တစ်ချောင်း ကို ငါတို့(အားလုံး) လက်ကိုင်ပြုခဲံ့ကြတယ်...........။။ ရောင်နီ...
Phone အတွက် 3D View နဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ Google Earth ဆော့ဝဲလေးပါ
Download - google.earth 7.1.3
Computer Viberမှာ မြန်မာစာ မြင်ရ ရေးရအောင်လုပ်နည်းနှင့် Computer အတွက် Viber ဆော့ဝဲ
ကွန်ပျုတာမှာ Viber မထည့်ရသေးရင်ယူထည့်ပါ ဒီဟာကို သုံးမယ်ဆိုရင် ထည့် ဒီဟာသုံးမယ်ဆို ဖုန်းမှာလည်း Viber ရှိမှ သုံးလို့ ရပါတယ် မြန်မာစြာ...
Android ဖုန်းမှာ မြန်မာစာရေးတာ နှေးသူများအတွက် အလိုလိုရေးပေးမယ့် Itext MM
ဒီဟာလေးကတော့ Google Play မှာ အမှတ်မထင်တွေ့ တာနဲ့စမ်းထည့်ကြည့်တာ တကယ်ကောင်းတယ် နေကောင်းလား ရေးတာက် နေ ဆိုတာကို ရေးလိုက်တာ...
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဓာတ်ပုံနဲ့ သီချင်းလုပ်ချင်ရင် အခွေထုတ်ချင်ရင် လက်ဆောင်ပေးဖို့ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ လုပ်ချင်သူများ အသုံးပြုဖို့ တကယ့်...
ပျောက်သွားတာ၊ မှားဖျက်တာတွေ ပြန်ရှာဖို့ အတွက် Data Recovery
ဒီဆော့ဝဲလေးက ပျောက်သွားတာတွေ ပြန်ရှာဖို့ အတွက်ပါ ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် မှားဖျက်မိတာတွေ Format ချမိတာတွေ ပြန်လည် Recove...